Chishanu, February 12, 2016 9: 16: 27 AM America / Los_Angeles
Mumwe Armati 5 vanotanga chirongwa hotera muSouth Africa, Africa, welcome kuti ashanyire hotera iri kuona tepi kwedu.
Armati 413 dzakatevedzana tepi catalouge ndapota tarisa zvinotevera:
Izvi Johannesburg hotera kuti nzvimbo iri Sandton, guta racho upscale mabhizimisi eruwa, rinongova pfupi vanofamba vachibva Gautrain Station uye maminitsi kubva zvinokwezva akafanana Nelson Mandela Square. Vaenzi vanonakidzwa nyore kuwana OR Tambo International Airport, inova 30 chete makiromita kubva hotera. Sarudza kubva 290 makamuri vane Amenities kufanana Free mukuru-chaizvo, Wireless Internet vaenzi kugara pahotera, kana vasarudze Stylish penthouse nokuda kumwezve dzezvitsigiro. Vaenzi kugara Business Kirasi Rooms, Inn uye penthouses vanonakidzwa kuenda Business Class Lounge. Watch sezvo chef kugadzirira ano Italian chili pakachena kicheni pana Vivace. The sün uye Outdoor dziva pamusoro 8th pauriri, ane vakazorora kylpylä uye vakanyatsoshongedzwa Planet Fitness Platinum Gym akavimbisa mikana Jafeti kuti unwind. mabasa ichi Johannesburg pahotera wacho zvinosanganisirawo vakachengeteka motokari kupaka. Chiitiko wehondo vanogona kuchengetera munhu 90-seater odhitoriyamu kana mumwe 15 vakanyatsoshongedzwa musangano makamuri zvebhizimisi uye kuungana.
Africa hotera yokugezera chirongwa